Min Zin – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
အဖွင့်၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းက အင်္ဂလိပ်ခရီးသွားတွေရေးတဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးသွားလမ်းညွှန် စာအုပ်တွေကို ကောက်လှန်လိုက်ရင် ဒီတိုင်းပြည်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတယ် ဆိုဦးတော့ ဗြိတိသျှအင်ပါယာထဲက အေးငြိမ်းသာယာ ကွန်းခိုစရာပဲလို့ လည်ချင့်စဖွယ် ဖတ်ကြရလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယကနေရန်ကုန်အလာ သင်္ဘောဆိုက်လို့ သစ်သားကုန်းပေါင်ထိုးတံတားပေါ်ကနေ ရန်ကုန် မြေကို ခြေချလိုက်တာနဲ့ စိတ်သက်သာရာရစေမယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ...
မြန်မာ ယခု ဘယ်ဆီသို့
အာရှလေ့လာရေး နော်ဒစ်အင်စတီကျူ့ စာအုပ်တိုက်၊ Burma/Myanmar: Where Now? Mikael Gravers and Flemming Ytzen (eds) Nordic Institute of Asia Studies Press, 2014. လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်ကျော်လောက်က ဆိုရင်တော့ လေ့လာသူ အားလုံးရဲ့အမြင်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဖိနှိပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာစရာ မရှိဘူးလို့ ယူဆခဲ့ကြတာပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ အားလုံး အံအားသင့်စရာ...
မင်းဇင် ၁ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံရေးဖြေလျော့မှု နောက်ပိုင်း ထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တပ်မတော် အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစလို့ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲခွဲထွက်ရေး ထပ်တူပြုထားတဲ့ အမြင်ဟာ အားနည်းသွားတာပါပဲ။ ဖက်ဒရယ်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ တားမြစ်ချက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖက်ဒရယ်ကို ဘယ်လို အနက်ကောက်မလဲ ဆိုတာကတော့ အင်အားစု အသီးသီးကြားမှာ အငြင်းအခုန် ဝိဝါဒပွားစရာ ဖြစ်နေဆဲပါ။ အားရစရာ တစ်ခုကတော့...
မင်းဇင် ၁ မြန်မာ့တပ်မတော် ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအစိုးရကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရကို ၂၀၁၆ ဧပြီလမှာ အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစကားပုံမှာ ”တစ်ဂူတည်း ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် မအောင်းနိုင်ဘူး” လို့ အဆိုရှိပေမယ့် စစ်အစိုးရ...
The New Configuration of Power Burma’s 8 November 2015 general elections—won inalandslide by the opposition National League for Democracy (NLD), led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi—have ushered in the second phase of the country’s political transition. The NLD won 390 (79.4 percent) of the 491 (due to the cancellation of seven townships) total elected seats in both houses of the Union...